ခက်မာ: March 2011
1. 2. ခက်မာ
Reactions: စက်ဘီးများ၊ ကြွက်သားများ၊ စီးကရက်များ ( ဇာတ်သိမ်း)
“ အဲဒါမင်းပြောခဲ့တာ။“ ရော်ဂျာကချက်ခြင်းတုန့်ပြန်သည်။ သူထိုင်နေရာကုလားထိုင်မှထလာပြီးရော်ဂျာကဆက်ပြော၏။ “ မင်းကအဲဒီလိုလုပ်ချင်တာလေ။ စက်ဘီးကိုသစ်သီးခြံထဲယူသွားပြီး ဖျက်ဆီးပစ်ရအောင်လို့ မင်းပြောခဲ့တာလေ။“ “ မင်းပါးစပ်ပိတ်ထားစမ်း“ မစ္စတာဘားမန်းက ရော်ဂျာ့ကိုလှမ်းပြောသည်။ “ သူ့စကားဆုံးရင် မင်းဆက်ပြောရမယ်ကောင်လေး။ ခုတော့ ငါဆက်ပြောမယ်။ မင်းတို့တတွေ စက်ဘီးကိုညဖက်ကြီး တရွတ်တိုက်ဆွဲသွားကြတယ်လေ။ အခု မင်းတို့နှစ်ယောက်ထဲက တယောက် ယောက်.....“ ဘားမန်းက ပထမကစ်ပ်ကိုကြည့်သည်။ ထို့နောက်ရော်ဂျာ့ကိုကြည့်ပြီးဆက်ပြောသည်။ “ စက်ဘီးဘယ်မှာလဲဆိုတာမင်းတို့သိပါတယ်။ မင်းတို့သိတာကိုစပြောဖို့ ငါအကြံပေးချင်တယ်။“ ဘားမန်းစကားဆုံးတော့ ဟမ်မီလ်တန်က ၀င်ပြောသည်။ “ ခင်ဗျားပြောတဲ့ပုံစံက နည်းလမ်းမကျဘူးလို့ ကျနော်ထင်တယ်။“ “ ဘာကွ..“ ဘားမန်းကနဖူးကြောတွေထောင်လာပြီး ဒေါသတကြီးပြန်ပြောသည်။ “ မင်း ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ်စမ်းပါ“ ဟမ်မီလ်တန် မတ်တတ်ထရပ်လိုက်သည်။ “ သွားကြစို့ရော်ဂျာ။ ကစ်ပ်.. မင်းရောလိုက်ခဲ့မလား၊ နေခဲ့ဦးမလား။“
Reactions: စက်ဘီးများ၊ ကြွက်သားများ၊ စီးကရက်များ
ဒီနေ့ဆိုလျှင် အီဗန် ဟမ်မီလ်တန်ဆေးလိပ်မသောက်ပဲနေတာနှစ်ရက်ရှိပြီ။ ဒီနှစ်ရက်အတွင်း သူပြောမိသမျှ နှင့်တွေးမိသမျှတွေကတော့ စီးကရက်နှင့်တနည်းမဟုတ်တနည်းပတ်သက်နေလေသည်။အခုလည်းသူသည် မီးဖိုခန်းအတွင်းမှအလင်းရောင်အောက်တွင် သူ့လက်တွေကိုမှောက်ချည်လှန်ချည်ဖြန့်ကြည့်လိုက်၊လက်ဆစ်တွေကိုတရှုံ့ရှုံ့နမ်းလိုက်လုပ်နေသည်။ “ အနံ့ရနေသေးတယ်“ ဟုသူကရေရွတ်မိတော့ သူ့ဇနီး အန်(န်) ဟမ်မီလ်တန်ကလှမ်းပြောသည်။ “ ဟုတ်တယ်။ ရှင်ဆေးလိပ်သောက်နေတုန်းက ချွေးထွက်ရင်ဆေးလိပ်နံ့ရသလိုပေါ့။“ “ ဆေးလိပ်မသောက်ပဲနေတာ သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတောင်မှဆေးလိပ်နံ့ကိုရနေသေးတယ်။ ရေချိုးတာတောင်အနံ့ကမပျောက်ဘူး“ သူမကပြောရင်းဆိုရင်းသူ့လက်မောင်းကိုပုတ်လိုက်သည်။
“ရှင်ဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဆိုတာကျမသိပါတယ်ယောက်ျားရယ်။ရှင်တော်တော်စိတ်ခိုင်တယ်ဆိုရင်တောင်မှ ဒုတိယမြောက်နေ့ဟာအခံရအခက်ဆုံးပဲ။ တတိယမြောက်နေ့လည်း ဆိုးသေးတာပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီထက်ကြာ ကြာဆက်နေနိုင်ရင်တော့ ရှင်အောင်မြင်ပြီ။ ဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့ ရှင်စိတ်အားထက်သန်နေတာကိုမြင်ရတာနဲ့ တင် ကျမဖြင့်ဝမ်းသာလှပါပြီ။“ “ အခုတော့ ရော်ဂျာ့ကိုခေါ်ချေပါဦး။ ညစာစားကြရအောင်“ ဟမ်မီလ်တန်အိမ်ရှေ့တံခါးကိုဖွင့်လိုက်တော့ အပြင်မှာမှောင်နေပြီ။ နိုဝင်ဘာလဆန်းပိုင်းရောက် နေပြီမို့ နေ့တာတိုပြီးအေးနေပြီ။ သူ့အိမ်ရှေ့လမ်းပေါ်တွင် သူမမြင်ဖူးသောကောင်လေးတယောက်ကို အမျိုးအစားကောင်းကောင်းစက်ဘီးလေးတစင်းပေါ်တွင် ခွလျှက်တွေ့ရသည်။ကောင်လေးကပလက်ဖောင်း ပေါ်ကိုခြေထောက်လျှက်ရပ်နေသည်။ “ မစ္စတာ ဟမ်မီလ်တန်ပါလားခင်ဗျာ...“ ကောင်လေးကမေးသည်။ “ ဟုတ်ပါတယ်။ ဘာကိစ္စများပါလိမ့်။ ရော်ဂျာနဲ့တွေ့ဖို့လား“ “ ရော်ဂျာက ကျနော့်အိမ်မှာ ကျနော့်အမေနဲ့စကားပြောနေပါတယ်။ အိမ်မှာဂရေးဘားမန်းဆိုတဲ့ ကောင်လေးနဲ့ ကစ်ပ်တို့လည်းရှိနေတယ်။ သူတို့ ကျနော့ညီရဲ့စက်ဘီးအကြောင်းပြောနေကြတာ။ အသေ အချာတော့ကျနော်မသိဘူး။ ကျနော့အမေကဒီကိုလာပြီး အန်ကယ့်လ်ကိုခေါ်ဖို့လွှတ်လိုက်တာပါ။ ရော်ဂျာ့ မိဘတယောက်ယောက်ကိုခေါ်ခဲ့ပါတဲ့။“ ကောင်လေးကစက်ဘီးလက်ကိုင်ကိုလှည့်နေရင်းပြောသည်။ “ ရော်ဂျာ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူးနော်။“ “ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကျနော်လည်းဦးနဲ့အတူလိုက်ခဲ့မှာပါ။“ သူကဖိနပ်စီးရန်အိမ်ထဲအိမ်ထဲပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ အန်(န်) ကသူ့ကိုဆီးမေးသည်။ “ ရော်ဂျာ့ကိုတွေ့လား“ “ ရော်ဂျာ ပြသနာတခုခုဖြစ်နေပုံရတယ်။ အပြင်မှာကောင်လေးတယောက်ရောက်နေတယ်။ ကောင်လေးက တို့နှစ်ယောက်ထဲက တယောက်ယောက်ကိုသူနဲ့လိုက်ခဲ့ပါတဲ့။“ “ ဟင်...ရော်ဂျာဘာဖြစ်လို့များလဲ။ “ အန်(န်)က အေပရွန်ကိုချွတ်ရင်းမေးသည်။ “ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။ ကြည့်ရတာကလေးအချင်းချင်းငြင်းခုန်နေကြတာနေမှာပါ။ အဲဒီကောင်လေးရဲ့ အမေက ကလေးတွေပြသနာကိုရှင်းပေးနေတာထင်တယ်“ “ ကျမလိုက်သွားရမလား“ သူခနစဉ်းစားသည်။ “ အင်း..မင်းလိုက်သွားရင်ပိုကောင်းမယ်။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ပဲသွားလိုက်ပါ့မယ်။ ငါတို့ပြန်လာမှ ညနေစာစားကြမယ်။ သိပ်ကြာမယ်မထင်ပါဘူး။“